Thenga Abalandeli be-Instagram eBrazil ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga abalandeli be-Instagram eBrazil
Disemba 13, 2018 0 IiCententarios 1007
Imithombo yeendaba zemveli ayisiye kuphela umsasazi kunye neendlela zentengiso ezinakho ukuvelisa izibonelelo zobuqu okanye zeshishini. Le nyani yatshintshe umbulelo ngokunyuka kweinethiwekhi zentlalo kunye neempembelelo zabo kwisininzi. I-Instagram ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zidume kakhulu. Ngesi sizathu, ngakumbi nangakumbi funa Thenga abalandeli ye-Instagram eBrazil. Ithagethi? Yandisa ukuthandwa kwakho.
Ukubalula ngakumbi, i-Instagram ibekwe njengenye yeyona ntengiso intandokazi yabantu baseBrazil. Kungenxa yokuphatha ngokulula, izinto ezintsha eziqhubekayo, unxibelelwano olulula nabanye ngemiyalezo okanye ngeefowuni zevidiyo. Ikwayeyona ndlela yokubonisa xa kufikelelwa kwezorhwebo.
Ungazibeka njani kwi-Instagram?
Kubasebenzisi abaninzi ukubeka iiakhawunti zabo kubaluleke kakhulu. Ngale ndlela banokufumana ukubaluleka abafuna ukutsala abaxhasi abatsha kunye nabaxumi. Esi sikhundla siphunyezwa ngokwandisa inani abalandeli kunye nonxibelelwano ngaphakathi kwiprofayili. Phumelela abalandeli abatsha Ayingomsebenzi olula. Ukulula kukuba luphawu oludumileyo okanye uphawu.
Ukuba ungena nje kwihlabathi le-Instagram okanye ishishini kwaye ufuna ukwazisa igama lakho okanye iimveliso zakho, kukho ababoneleli beenkonzo abakunika ithuba lokuthenga abalandeli be-Instagram eBrazil. Amaxabiso afikeleleke ngokwenene. Ke uya kubona ukuba kumcimbi weeyure amanani akho kunye nezibalo zakho ziya kuba nenkqubela phambili elungileyo.
Eli nyathelo lamkelwe ngabaphembeleli bedijithali abavela eBrazil, amabhendi, abadlali, iivenkile ezikwi-intanethi, abadlali bebhola ekhatywayo, ablogi bokuqina, abafoto, abameli, phakathi kwabanye. Xa amanani enyuka, kunjalo ke ukubakho kweprofayili engena kwi "Explore" tab. Oku kuyanceda ufumana abalandeli ngendlela yendalo.
Kukho iiarhente ezinikezela ngeenkonzo ezongezelelekileyo ngokuthengwa kwenani elithile labalandeli. Ungafumana izicwangciso ezifanelekileyo iimfuno zakho okanye imilinganiselo yepokotho. Kwaye nangona abaninzi belahla le ndlela yokufumana abalandeli kwi-Instagram, iseyindlela ekhawulezayo, elula, ekhululekile kunye nezoqoqosho yokukhulisa iprofayili kwinethiwekhi yoluntu.
Iiarhente okanye ababoneleli ngeenkonzo baqinisekisa ukuba iinkqubo zenziwa phantsi kwemfihlo engqongqo. Akukho mntu uya kwazi ukuba uthenge abalandeli. Olunye uphawu kukuba awudingi ukubalandela. Abalandeli bayohlala apho ukwenza ukuba ukhule. Kubalulekile ukuyikhankanya loo nto Ezi nkonzo zihlonipha imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo ye-Instagram ukuze i-akhawunti yakho ingenangxaki. Ke ungonwabela izibonelelo ezinikezelayo Thenga abalandeli be-Instagram eBrazil
Kukho iiarhente ezinoxanduva ukuba, kwimeko yokuphazamiseka, ubuyise imali yakho igcwele. Banamaqonga ebhanki amaninzi okwenza iintlawulo kwi-Intanethi eBrazil Ezinye zezona zaziwa kakhulu yiPagSeguro, i-Paypal kwaye ziye zenza ukuba i-ecosystems ifumane iintlawulo ngeBitcoin okanye enye i-cryptocurrencies.
Ungaphoswa lithuba lokwenza utyalomali oluza kutshintsha ubomi bakho kumaqonga e2.0. Yongeza abalandeli be-Instagram eBrazil Unokufumana ukusuka kwi-100 ukuya kubalandeli be-10.000 ngamaxabiso amangalisayo. Ukongeza kumgangatho wabalandeli, abayi kwenza isikhephe kuphela, baya kujonga ekunikezeleni izithuba zakho ezinje, bekhulisa inani lokujonga (kwimeko yeevidiyo) kunye nokunxibelelana nembali nganye oyilayishayo kwi-Instagram.
Qiniseka ukuba ukhetha umboneleli ngenkonzo obalaseleyo okanye eyona arhente ilungileyo yokufumana iziphumo ozifunayo ngaphandle kokuphazamiseka, imigibe kwaye ngexesha elifutshane kakhulu kunokwenzeka.
1 Ungazibeka njani kwi-Instagram?
2 Thenga abalandeli be-Instagram eBrazil
Thenga abalandeli be-Instagram eBolivia
Fumana abalandeli kwi-Instagram